Akụkọ - Nhazi na njirimara igwe nkpuchi
Full akpaka mmepụta nkpuchi ahu igwe, tinyere nri, plastic warara ụdị aluminum warara ntinye / agbapụ, ọnọdụ nhọrọ, ultrasonic anọ na, slicing na na, na mmepụta dị nnọọ elu, nwere ike na-emepụta 1-200 iberibe na nkeji. Isi ike ugboro ole akakabarede ọsọ iwu nwere ike ịdị ngwa ngwa ma ọ bụ nwayọ. Enwere ike ịmepụta nkpuchi dị iche iche site na iji ihe dị iche iche. Ngwaahịa nwere okpukpu abụọ ma ọ bụ atọ, ma ngwaahịa ngwaahịa ahụ kwụsiri ike, ọrụ ahụ dị mma, mkpọtụ ahụ dị ntakịrị, ala ala dịkwa obere. Ihe ndị dị mkpa: filament spunbonded filament non-kpara, 16-30g / m2, kwesịrị ekwesị maka nhazi nkpuchi nwere ike iwepụ.
Hot pịa ịkpụzi: nkpuchi akụrụngwa (na-abụghị kpara akwa) na ụdị nke na-ekpo ọkụ ịpị (cup udi). 1. Gụnyere akpaka ibia edinam na nri etiti; 2. mepụta otu nkpuchi masks anọ oge ọ bụla.
Mberi: eji mee akwa oyi akwa (mkpuchi nchekwa) nke ihe nkpuchi. A na-eji ígwè alloy pụrụ iche eme ka wiil ifuru. Agụba ahụ na-eguzogide ọgwụ ma nwee ogologo ndụ ọrụ. Edị mgbanwe dị iche iche nke eccentric na-agbanwe agbanwe, ngwa ngwa na ọkwa dị elu. N'iji mkpịsị aka ultrasonic na nhazi wiilị ígwè pụrụ iche, a gaghị emebi akụkụ nke akwa ahụ, ọ dịghị mkpa ka ị kpoo ọkụ mgbe ị na-arụpụta na-enweghị burr, ọ nwere ike ịrụ ọrụ na-aga n'ihu
Onye na-ejide oghere: pịa n'ime na mpụta nke nkpuchi
Mgbuji: jiri pneumatic zọọ iji belata oke nke nkpuchi.
Wgbado ọkụ nke iku ume iku ume: ịgbado ọkụ iku ume valvụ
Ịgbado ọkụ ebe: 130mm
Ọsọ: 20-30 / min
Ngwakọta ihe eji arụ ọrụ nke igwe ahụ na - ejide akara njikwa njikwa nchekwa; kọmputa nwere ọgụgụ isi akara nwere ike nweta izi ezi nke otu puku nke abụọ; na ọkwa larịị ukpụhọde, na fuselage moto na-akpaghị aka adahade na rịdata, na isi kehoraizin ukpụhọde.
Ear band ntụpọ ịgbado ọkụ igwe: ọsọ: 8-12 iberibe / min. ọ ga-eji maka ịgbado ọkụ ụgbọelu, n'ime ntị belt / elu ntị belt, ọkọlọtọ nkpuchi, ọbọgwụ ọbọgwụ ụdị ndị ọzọ pụrụ iche ekara masks. Mgbe emechara ahụ nkpuchi, a na-eji aka welded band ntị
Ultrasonic n'ime ntị mmachi nkpuchi igwe na-eji ultrasonic ịgbado ọkụ usoro. Mgbe nkpuchi ahụ kpaliri ọnọdụ nhazi ahụ, a ga-emepụta ultrasonic wave na-akpaghị aka. A ga-eme mkpọtụ nke micro njupụta na ogo dị elu na eriri ntị, ọ ga-agbanwe ka ọ bụrụ okpomọkụ ozugbo. A ga-agbaze ihe a ga - agbaze, a ga - agbatị ma ọ bụ tinye ya na ntị ntị n'akụkụ nke nkpuchi ahụ. Ọ bụ usoro nhazi maka imepụta ihe mkpuchi egwu dị n'ime, nke naanị chọrọ onye ọrụ ọrụ ahụ A na-etinye ahụ nkpuchi ahụ na mpempe nkpuchi nkpuchi, ihe na-esote na-arụ ọrụ na-akpaghị aka ruo mgbe ngwaahịa ahụ mechara.
Usoro ọrụ: (nkpuchi ahu) ntuziaka nri → ntị belt akpaka nri → ultrasonic ntị band ịgbado ọkụ → na-abụghị kpara akwa ihu nri na wrapping → ultrasonic n'akụkụ band ịgbado ọkụ → ịkpụ eriri akụkụ → Emechara ngwaahịa mmepụta → na-agụta → Emechara ngwaahịa stacking → na-ebufe site na ngwaọrụ ebu ebu
Oldkpakọba nkpuchi igwe
Oldkpakọba nkpuchi igwe, makwaara dị ka C-type nkpuchi igwe, bụ a n'ụzọ zuru ezu akpaka igwe maka mmepụta nke mpịachi nkpuchi ahu. Ọ na-eji teknụzụ ultrasonic jikọtara 3-5 nke PP na-abụghị ndị a kpara akpa, carbon na-arụ ọrụ na ihe nzacha, wee wepụta ahụ mkpuchi mpịachi, nke nwere ike ịhazi 3m9001, 9002 na ndị ọzọ nkpuchi. Dika ihe di iche iche eji eme ihe, ihe nkpuchi meputara nwere ike iru onodu di iche iche dika ffp1, FFP2, N95, wdg. Eriri eriri bu ihe na-agbanwe agbanwe nke na-achoghi ya, nke na-eme ka nti onye nwe ya ghara iru ala. Ihe nhicha akwa nhicha nke nkpuchi nwere mmetụta nzacha dị mma, nke dabara na ọdịdị ihu Asia, ma nwee ike itinye ya n'ọrụ, nsị na ụlọ ọrụ mmetọ ndị ọzọ.
Ọrụ na atụmatụ:
1. Ọ nwere ike hazie 3m9001, 9002 na ndị ọzọ na mpịachi nkpuchi ahu, nke nwere ike okokụre n'otu oge.
Full akpaka ultrasonic ọbọgwụ ọnụ nkpuchi igwe (ọbọgwụ ọnụ nkpuchi n'ichepụta igwe) bụ a igwe nke nwere ike na-emepụta ọbọgwụ ọnụ nkpuchi maka nnukwu mmetọ ụlọ ọrụ site na iji ụkpụrụ nke ultrasonic enweghị nkebi ịgbado ọkụ. 4-10 n'ígwé nke eyi na-abụghị kpara akwa na nyo ihe (dị ka gbazee fụọ ákwà, ọrụ carbon ihe onwunwe, wdg) ike ga-eji na ahu nke igwe nkpuchi, ka na-emepụta okokụre ngwaahịa nke dị iche iche filtration etoju dị ka dị ka N95, FFP2, wdg Na igwe a nwere nnukwu ogo nke akpaaka, site na nri iji mechaa ngwaahịa bụ akara nke akpaka ọrụ: akụrụngwa akpaka nri, onwe ha imi akara erute usoro, na ike na-akpaghị aka n'ogige atụrụ imi akara na-abụghị kpara ákwà, akpaka mpịachi na okokụre ngwaahịa ọnwụ, na ike na-akpaghị aka tinye ume valvụ oghere. Ngwaahịa nke igwe ọbọgwụ ọbọgwụ mepụtara nwere ọhụụ mara mma, arụmọrụ kwụsiri ike, mkpụrụ dị elu, ọnụego ntụpọ dị ala na ọrụ dị mfe.
Atụmatụ nke duckbill nkpuchi igwe:
1、 Akpaka nri usoro
2、 Usoro nchekwa
3、 Ultrasonic okpomọkụ akara usoro
4、 Igwe dum nwere arụmọrụ arụmọrụ, na-agbanwe agbanwe mmepụta ọsọ ọsọ, arụmọrụ dị elu, na-eru 60 iberibe kwa nkeji, na-agụta ọnụ na nke ziri ezi, ọnụọgụ dị elu nke akụrụngwa, ọrụ dị mfe ma dị mma na ndozi, ogo dị elu nke akpaaka, na mbelata dị irè nke ụgwọ ọrụ.
sooks clamping igwe, abụghị kpara ihu nkpuchi Ndinam igwe, igwe nkpuchi ihu nkpuchi, ịwa ahụ nkpuchi Ndinam igwe, abụghị kpara nkpuchi Ndinam igwe, ịwa ahụ ihu nkpuchi Ndinam igwe,